UJerry Varghese Imisebenzi Yomhlaba Wonke Nokuqashelwa
Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi!
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at December 29, 2017
UJerry Varghese International Careers Solution wabantu abafuna umsebenzi emhlabeni jikelele. Izichazi ezivela eNdiya ukusiza abantu ukuthola umsebenzi.
Imisebenzi ku Dubai noJerry Varghese International Careers. Inkampani ingenye yezindawo ezihamba phambili phakathi kwabaqashi. Empeleni, Jerry Varghese iqembu eliholayo lokuqasha ngaphakathi izixazululo zokuqasha ochwepheshe zokuphuma. Kuhlanganiswe nezikhundla eziphezulu zokuqasha. UJerry Varghese ubaluleki ongcono kakhulu futhi ophakeme kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, inkampani ihlinzeka ngokuhlanganisiwe nokuphelele izinsizakalo zokuqasha eGulf.
Ngesikhathi esifanayo lapho usebenzisa iJerry Varghese International Careers. Nakanjani, bona hlinzeka ngokubekwa okungabizi kakhulu ebhizinisini laseDubai. Elinye iphuzu elibalulekile ongasebenza ngalo imboni futhi imisebenzi kahulumeni. Into yokuqala yokukhumbula leyo nkampani ukuba khona okunamandla eMiddle East futhi basebenze iminyaka engaphezu kwe-30. Ngasohlangothini oluhle lapho wenza ukufuna umsebenzi nale nkampani yokuqasha. Ungalindela imisebenzi yamazwe omhlaba kanye nezinsizakalo zabasebenzi. Hhayi ezinkampanini zeGulf kuphela kodwa futhi nasemhlabeni jikelele.
Eminyakeni yokugcina ye-25, uJerry Varghese ubelokhu esiza abafuna umsebenzi. Ngokuvamile okuvela emhlabeni wonke futhi okuhlanganisa ne-India futhi Pakistan. Ubufakazi obuqand 'ikhanda bokuthi inkampani ingenye engcono kakhulu. Ingabe ubukhona babo busebenzisa ukuqashwa komhlaba jikelele ubuchwepheshe emakethe eMiddle East.
Ngalesi sizathu, sizama ukwethula inkampani kuwe. Njengoba kukhonjisiwe ngenhla kokuqonda kwenkampani imakethe yokuqashwa kahle. Kunoma ikuphi, ukufuna umsebenzi kubo kuyisinqumo esihle. Konke okusha ofuna umsebenzi obhekene nezinkinga ngokufuna umsebenzi kwi-GCC.
Imisebenzi yaseJerry Varghese Dubai
Kepha ngokuqhubeka kwesikhathi le nkampani isebenza eduze. Ngabaqashi kanye nabaqashi ukukunikeza okungcono kakhulu ukuqasha izinsizakalo zemakethe yamisebenzi yaphesheya. Kwenziwe umsila ukuqasha izixazululo zabo bonke abaqashiwe yenza le nkampani ibe yinhle kuFacebook naku-Linkedin. Ukuqasha kabusha eDubai, e-United Arab Emirates ukusiza izinkampani ezithile ukuphatha izidingo zazo zokuqasha.
UJerry Varghese osebenza ngaphakathi kwezimboni ze11. Ngezikhathi ezithile le nkampani ku Abasebenzi baseDubai, izidingo zokuqashwa kweklayenti labo ngezisebenzi ezahlukahlukene. Okusha okuvela kuzidingo zezimakethe zomsebenzi zomhlaba wonke, kusobala, kuya ngesipiliyoni sokhetho. Ngezinselelo eziningi kakhulu ukuthola umsebenzi e-Dubai. Ukwenza le nkampani ingcono kakhulu ukuyisebenzisa ngezikhathi zamanje.
UJerry Varghese usebenza ngokugcwele ejensi lokuqashwa futhi ungayisebenzisa noma kunini lapho uthanda khona. Kusesikhathini samanje, inkampani eyinkimbinkimbi yokuqasha izabelo zisuselwe emazweni we-GCC. Kepha ungathola izikhala ezinentshisekelo nabo kalula kuwebhusayithi yabo. Ngokuhamba kwesikhathi, kuqashelwa izikhungo zokuqasha asize abafuna imisebenzi eDubai. Inkampani esebenza ngamanani amaklayenti amaningi futhi kunjalo nabantu abaningi.
Kuyasebenza imiphakathi imisebenzi efana namatekisi eDubai ilitshe kulabo abafuna umsebenzi. Ngakho-ke kususelwa kuleyo nkampani ephethe amanani amahle. Ngokuzibophezela okukhulayo, nobuchwepheshe bokuqasha imakethe kwenza ngempela le nhlangano okungcono kakhulu kubantu base Dubai City.
UJerry Varghese kufanele abe ngumlingani
Kuze kube manje, uJerry Varghese osebenza emakethe yomsebenzi wamazwe ngamazwe. Futhi inikeza ngempumelelo izinsizakalo zokuqasha iminyaka engaphezulu kwe-30. Ngesikhathi esifanayo, le nkampani ibuye ibe nehhovisi eNdiya.
Enkampanini yangaphambili ehlinzeka izixazululo zokuqasha abasebenzi nezisebenzi. Ngokuvamile AmaNdiya afuna ukuqala umsebenzi e-Dubai. Ngezikhathi ezithile ngaphezulu kwamakhasimende wamazwe aphesheya kwe-500 abheke ukugcwalisa izidingo zabasebenzi. Masinyane lapho ufaka isicelo sakaza amagama mayelana nezikhala zomhlaba wonke futhi uthole umsebenzi ngokushesha.
Izinkampani ze-Gulf zihamba ngale kwalokho obekulindelwe ukuthi kuzoqashwa kabusha. Ngakho-ke udinga ukuthola indima efanele futhi abeluleki ngokuchayelwa kwakho umsebenzi wamazwe omhlaba. Ngakho-ke ekugcineni uma ufaka isicelo noJerry CV yakho uzohlinzekelwa ukuthi iphelele Ukunikezwa komsebenzi e-Dubai 2018.
Jerry Varghese uhlolojikelele
Le nkampani yokuqasha ebizwa ngeJerry Varghese. Ngokuvamile ukukhuluma kugujwa ngeminyaka engu-30 plus izinsizakalo zokuqasha ngempumelelo. Ngaphezu kwalokho, inkampani enikeza ochwepheshe umsebenzi wokufuna i-Saudi Arabia & izixazululo zokuqasha abasebenzi. Basiza abantu kusuka eNdiya indlela yokuthola i-visa.
Ngalesi nkampani, ungasebenza njalo ngenyanga ngezinhlangano ezingaphezu kwe-400 kanye neklayenti. Le nkampani yasakazeka kuzo zonke izimboni ze-11 kule ndawo Gulf lapho ungazidayisa khona.
Imisebenzi ku Dubai City ukudlulela ngale kwe iphrofayli ye-recruiter, le nkampani idlala indima yabeluleki emakethe yemisebenzi yase-United Arab. Le nkampani ihlinzeka ngempumelelo nangokuphelele Ukuqasha nezinsizakalo zokwenza kwebhizinisi emakethe yemisebenzi yaseGulf.
Imikhakha emisha kanye nezinhlaka zikahulumeni. Ithimba lethu lochwepheshe lizibophezele ekunikezeni izixazululo zamandla ngokusebenzisa i-recognized yethu inqubo yokuqashwa uhlelo, izinsiza nobuchwepheshe ukufeza iklayenti lethu ibhizinisi imigomo.
Inkampani eN Dubai
Njengenkampani, uJerry Varghese International Careers bakholelwa kubantu bamandla. Ikakhulukazi ukuze uthole imali eMpumalanga Ephakathi. Le nkampani yokuphatha inomuzwa wokuthi abasebenzi bayimpahla ebaluleke kakhulu kunoma yiliphi ibhizinisi. Ukusebenza eMiddle East yiphupho eliyinhloko kwabaningi be exatriates emhlabeni wonke.
Izinkampani zokuqasha zisesidingo sabathengi. Inkampani yethu izama njalo ukukhethwa nokusiza abanye. Kungakho sibhala i-athikili mayelana nale nkampani. Abaphathi bagcinwa futhi igcinwe ibhizinisi lamazwe ngamazwe ku-GCC. UJerry Varghese usebenzisa izinsiza ezikhona kakhulu kunoma iyiphi inhlangano.
Le nkampani isebenza kahle ngoba isebenzisa isikhathi esingaphezu kwamashumi eminyaka embonini njenge HR professional. Ukugijima kule nkampani kuthathe iminyaka engaphezulu kwe-31 emuva. Ikakhulukazi faka iNdiya kuya emazweni aseGulf le nkampani yakha inhlangano yomhlaba wonke. Ngokuvamile ukusekela izinkampani ezisebenzayo. Kanye nokukhetha impahla ebaluleke kakhulu ukuqashwa kwemithombo yemakethe eGCC. UJerry Varghese International Careers Inkampani enhle ye Indian expats.
Imisebenzi e-Gulf Countries
Ngaphambi kokuthi le nkampani iqhubeke nokuqasha. Ukuqalisa kudinga ingqalasizinda enhle eNdiya. Inkampani yaqala ngobuchwepheshe obuqinile ngaphakathi kwebhizinisi eDubai. Baqalile uhlelo lokuqasha oludidiyelwe kanye nobuchwepheshe besigaba sezwe e-Indian.
Ungakhuluma nabo on mobile ukusebenzisana nezinkampani kanye ukhetho. Kuyindlela engcono kakhulu kwinqubo yokuqasha izinikele. Ikakhulu ekubekeni imali njalo ekuthuthukiseni izinsizakalo zokuqasha eNdiya. Ngemuva kwalokho kudluliselwa kwamanye amazwe emazweni aseGulf. Ubufakazi obucindezela kakhulu lokho kufanele uqale ukuxhumana nale nkampani abasebenzi babo abaqeqeshiwe. Ngoba wonke azinikezele ekubekweni indawo ezindaweni ezithile. Isibonelo, unga thola umsebenzi yonke indawo I-Saudi Arabia in imisebenzi yebhange.
I-Jerry Varghese International Careers ibalulekile Amaklayenti aseNdiya nabalingani. Le nkampani yokuqasha ibasiza ukuba bahlangabezane nezidingo zokuqasha ngakunye Izinkampani zeGulf. Ikakhulu kusuka I-United Arab Emirates kanye neQatar. Kepha ngakolunye uhlangothi, udinga ukushaya izinhloso ezithile. Ngasohlangothini oluhle, ungathola isikhathi esifushane nesikhathi eside amathuba emisebenzi eGulf.
Izinsiza zokuqasha zikaJerry Varghese
Jerry Varghese's imisebenzi yokuqasha i-MBA izitshudeni zisatshalaliswa kabanzi emakethe ehlukahlukene yemisebenzi. Ukuba khona kweNdiya eqasha imakethe. Ngokuvamile, kukhuphuka kuwo wonke amanye amazwe anjengeKuwait ne-Oman. UJerry Varghese ukuqasha okhonza njenge uzakwabo ogcwele ngokugcwele eGulf. Abaphathi kule nkampani beqwashisa ngomzamo. Ikakhulu ukusebenzisana nabanye abaluleki abaphathi be-International. Lokhu ukuphatha kune kutshalwe imali ngamandla ukwakha ubuhlobo obuqinile nabanye futhi sakhe ingqalasizinda enamandla eNdiya.
The ingqalasizinda yokuthengisa yisisekelo sanoma yiliphi ibhizinisi. Kepha le nkampani isuselwa ekubuyekezweni okuphezulu. Futhi ngaphezu kwalokho, bayakwazi ukuxhasa ukhetho olusha. Kusuka ekuthengiseni kokuhleba eNdiya. Ngoba basebenzela ukuthi bafinyelele amazinga aphezulu wokuqashwa futhi ukusebenza okuqinile kokuphatha.
Nokho, uma ungomunye wabo abasebenzi baseNingizimu Afrika ungafakwa futhi. Ngoba inkampani yethu isiza emhlabeni jikelele. Ngokwesibonelo, Ivela ku-Philipines zibekwe futhi UAE. Inkampani esebenza ikakhulukazi eNdiya. Ngokuvamile, banezindawo ezinhle. Isibonelo, amahhovisi egatsha ahlanganisa ingxenye enkulu ye India evela Delhi eTrivandrum.
Inkampani enhle kakhulu ukuthola umsebenzi
Kodwa ungafakwa kwelinye lalabo izindawo ezinhle zabasebenzi base Dubai. Inkampani ukusiza othisha ukuthola umsebenzi kanye nabaphathi ukuthola umsebenzi okhokhelwa kahle.
Amahhovisi ethu ezinkampani nezinhlelo zombili zombili zikhona endaweni yezimali yezwe, e-Mumbai. Ukuba khona kwe-pan-India kusenza sikwazi ukuxhuma echibini elikhulu lamalenta futhi sithole ukuxuba okuhle kakhulu kwabokhetho kumaklayenti ethu ebhizinisini lezimoto. Ngakolunye uhlangothi, i-Jerry Varghese ihlangene namahhovisi amaningana futhi ahlala kuwo amazwe ahlukene aseMpumalanga Ephakathi imisebenzi.
Ungakwazi thola umsebenzi ezinkampanini zikahulumeni e-UAE & Kuwait futhi eQatar. Ngenxa yesisombululo seJerry Varghese International Career. Ngokuqinisekile ukusiza abanye ukuthi bahlangane Izidingo zokuqasha ezivela eNdiya e-United Arab Emirates. Futhi inkampani ihlala isebenza ukuhlinzeka ngamakhasimende amahle. Ngokuvamile, kusiza amaklayenti amasha ukuqasha kudlula kahle.
Le nkampani ingakusiza ukukuthola amathuba emisebenzi emisebenzi yehhotela. La mahhovisi abambisene kahle nezinkampani atholakala emhlabeni wonke ezindaweni ezinamasu. Lapho beqala ukusebenzisana nale nkampani. Amahhovisi womlingani qala ukumela sonke isifunda. Enye yezibonelo yi-UAE neKuwait ngoba izungeze indawo yonke.
Inkampani nakanjani asize abokufika ekufinyeleleni imisebenzi enikezwayo. Inkampani yansuku zonke enikela ngenani elikhulu labafundi. Izama ukufanisa isipiliyoni ngokuya ngesipiliyoni sabo. Kanye nokuzihambisa esifundeni esikhethiwe. Ngesikhathi esifanayo ukusebenzisana nama-expats aphesheya inike amandla le nkampani ukuthi ifune abantu abafuna ukuqokwa emhlabeni jikelele. Futhi sizibeka nendawo yethu ye-GCC. Ngakolunye uhlangothi sicela uvakashele yethu Umhlahlandlela wokudlulela emazweni asemathanjeni amaqembu emisebenzi.
Amaqembu we-WhatsApp e-Dubai
Indian futhi I-Pakistani expats ngifuna imisebenzi nsuku zonke. Sinalokhu engqondweni, siyikho ukusiza abafuna umsebenzi e-UAE. Kunamaqembu ambalwa kwiwebhusayithi yethu lapho okubhaliswa khona imisebenzi yasendaweni. Futhi abantu baseNingizimu Afrika naseNdiya bethumela futhi ngethemba elizothola umsebenzi. Ngakho-ke ithimba lethu labaphathi liyeluleka ngokuqinile abantu abasha ukuthi bathumele izingcezu zolwazi kumaqembu ethu. Vakashela Jerry Varghese International Careers iwebhusayithi.
Ngokuvamile, ngaphambi kokuhlala kuwebhusayithi yethu. Ngokuqinisekile, kufanele futhi ubheke izinkampani zethu eziphezulu zokuqasha ukuze uthole imali. Injini entsha yokusesha umsebenzi wokufuna umsebenzi futhi Iwebhusayithi ye-Monster yezindleko. Kukufanele impela ukufaka isicelo nge-CV yakho. Bangaba kakhulu kukuhle kuwe ngokuya ngesicelo esisheshayo.
Umsebenzi Wamazwe Ose-UAE
Ingabe ufuna ukuthola UJob e Dubai? nakuba lokhu kungaba yiqiniso singakusiza ukuba uqale umsebenzi omusha kuThe UAE!
Layisha kabusha kuya okusheshayo Idolobha Elikhulayo Emhlabeni! - Dubai City
Dubai City Inkampani manje ihlinzeka okuhle iziqondiso Imisebenzi eDubai. Ithimba lethu lathatha isinqumo sokungeza imininingwane yolimi ngalunye I-Dubay expats. Ngakho, ngalokhu engqondweni, manje ungathola iziqondiso, amathiphu kanye nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.